Mithathu Imidlalo Yenguqu Egobhozisa Amathe Limpelaviki
Ncwabakazi 04, 2017
Isigaba seCastle Lager Premier Soccer League sikhanya limpelasonto silemidlalo yenguqu ezbakuyabukelwa ngabanengi emadolobheni amagumbi amane elizwe okungaguqula isimo sengalane yemiklomelo ngoMvulo.
Kusukela enkundleni yeRufaro Stadium, Mandava, eLuveve kyabe kungabizwa ozwayo. Umdlalo okhangelelwe ngabanengi ngosenkundleni ye Mandava Stadium lapho okudibana amaqembu aphezulu kwengalane yemiklomelo abayibo abanqobayo ngomnyaka ka2015 abe Chicken Inn leqembu eliqeqetshwa ngu Norman Mapeza ele FC Platinum.
Amaqembu la womabili wonke alalo ithuba lokunqoba ukuba zintshantshu zalonyaka kungalane yemiklomelo njengoba i- Chicken Inn, ikhokhela ngomklomelo owodwa kule Ngezi Platinum Stars, ehlezi endaweni yesibili belandelwa ngabe Game Corks.
Lalobanje abanye besithi umdlalo wasenkundleni ye Mandava yiwo umdlalo omkhulu limpelaviki, kulabanye abangavumelani lalu mbono besithi umdlalo omkhulu ngosenkundleni ye Rufaro Stadium eHarare kusasa phakathi kweqembu le Black Rhinos lele Dynamos. Emdlalweni wokucina amaqembu la aze anqikilane iDeMbare itshaywe 1-0 ngakhoke ingena kulumdlalo ngolaka ifuna ukuphindisela ukuyangiswa eyakwenziwa kulowo mdlalo, njalo izama ukujabulisa abalandeli bayo.
Abanye njalo ngabathi umdlalo ozwayo ngosenkhundleni ye Luveve ko Bulawayo lapho okudibana abeqembu le Ngezi Platinum Stars abayibo abahlezi endaweni yesibili bekhangelelwe ukuba lethuba lokubazintshantshu zalonyaka zePSL ngoba betsheyene ngomklomelo owodwa leChicken Inn ekhokhelayo kungalane yemiklomelo, bona ke abadlala leqembu elisendaweni yesihlanu ele How Mine.
Kwezemidlalo sikhangela imidlalo yenguqu ekhona ngempelasonto